Sublimation Ink Fekitori | China Sublimation Ink Vagadziri, Vatengesi
5-25% Sirivha Nitrate Bhuruu / P ...
5-25% SN Bhuruu / Pepuru Ruvara ...
Kuchengetedza kweLiquid Sublima ...
30ml Bhodhoro Girazi Smooth W ...
1000ML Bhodhoro Yekupisa Yekuchinjisa Sublimation Inks yeEpson / Mimaki / Roland / Mutoh Printer Kudhinda
Sublimation inki inemvura-inogadzikana inogadzirwa kubva kune yakasvibirira uye echisikigo zvigadzirwa semiti, kana zvimwe zvekugadzira zvinhu. Iyo colorant, yakasanganiswa nemvura, inopa iyo inki mavara.
Yedu sublimation inki inoshandiswa zvakanyanya kuEpson uye imwe brand printa, saMimaki, Mutoh, Roland etc. Sublimation inki yakagadzirirwa kununura mashandiro akaitwa pane akasiyana anodhinda-musoro. Sublimation inks inogadzirwa kubva pakuchena kwakadzika Simba rishoma rinoparadzira dhayi. Nekudaro ivo vanopa yakanakisa kudhinda-musoro mashandiro uye hwakawedzera hupenyu hwehubu. Zvakare, huwandu hwakanakisa sublimation inki inowanikwa kuti ishandiswe nemhando dzakasiyana dzemapepa ekuremekedza.